တောင်ငူကျောင်းသူ လေး ရဲ့ သဘက်ပဲ ပတ်ထားတဲ့ အလှ (ကိုပေ.) အဆက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » တောင်ငူကျောင်းသူ လေး ရဲ့ သဘက်ပဲ ပတ်ထားတဲ့ အလှ (ကိုပေ.) အဆက်
တောင်ငူကျောင်းသူ လေး ရဲ့ သဘက်ပဲ ပတ်ထားတဲ့ အလှ (ကိုပေ.) အဆက်
Posted by ရွှေဘိုသား on Jul 22, 2011 in Entertainment | 42 comments
ရွာထဲက ကိုပေ ကိုတောင်းဆိုတဲ. ရွာသားတွေ အတွက်နော်
ရှာမတွေ.ဘူး တွေ.ရင်တင်ပေးပါဆိုလို. တင်ပေးလိုက်တာ
ဒါမျိုးကတော. အနော်တို.ေ၇ွှဘိုမှာ ကောက်စိုက်မတွေ ချောင်းထဲဖြတ်ကူးသလောက်တောင် မလန်းဘူး
တောင်ငူ က ကျောင်းသူဆိုလား ဆရာမဆိုလားပဲ
တစ်ပုံတော. ကျန်သေးတယ် သူ.အဖေလား ဘဲဘဲကြီးနဲ. အာဘွားပေးနေတာ သူ.အဖေဆိုရင် ငရဲကြီးမှာ ကြောက်လို. တင်မပေးတာ
ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပေးတာ ကောင်လေးဖြစ်မလား ကောင်မလေးဖြစ်မလာ; ?
ကောင်မလေးကတော.နော် ကျွတ်တွယ်ရင် ဒုက္ခ
ကြော်ငြာတာလားမသိဘူး လက်ဝတ်ရတာနာရော ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းရော တစ်မျိုးမထင်နဲ.နော် လက်ကရွှေတွေကိုပြောတာ
ဒါမျိုးဆို ကျွန်တော်ကလည်း မရ ရအောင်ရှာတတ်တယ် ဟဲဟဲ
ရွာထဲက ကိုပေကြီး ပြောလို. ၀င်ကြည်.လိုက်တာ ရွာထဲက တောင်းဆိုတဲ. အစ်ကိုတွေကို ကိုယ်ချင်းစာလို. တကူးတက တင်ပေးတာနော်
တင်ပေးလို.သာပေးရတာ နောက်က ရှုခင်းကတောင် ပိုလှသေးတယ်
အားလုံးကို တာ.တာ ကျွန်မ အိပ်တော.မှာပါတဲ.
ရွာထဲက ဘဲဘဲတွေ လက်ပြလိုက်အုံးနော်
ဒါကတော. ပိုက်ဆံရှိ ပုလဲ နဲ.တောင် ဖုံးအုပ်လို.ရတယ်ဆိုတာ ပြောထာထင်တယ်နော် ကြော်ငြာတာပါ
သူလေးက တောင်ငူက ကျောင်းသူဆိုလား ဆရာမဆိုလားပဲ ဖေ.ဘွတ် ထဲမှာပြောထားကြတာပါ
ကျနော် တော.မသိဘူးနော် သိရင်လည်း ဖွင်.ချကြအုံးဗျ
တောင်ငူကျောင်းသူဆိုတော့ တောင်ငူဘယ်နားမှာလဲ။ တောင်ငူနေတာမကြာသေးတော့နေရာမသိဘူး။ ပုလဲနဲ့ဖုံးတာများတယ်။
I dont care .But terrible.I m thinking no one is around there??
သိဘူးအစ်ကိုရ ကျွန်တော်လည်း ဖေ.ဘွတ်မှာ ၀င်ကြည်.ပြီး သူများမန်းတာတွေ.လို. တောင်ငူကဆိုတာ
သိရတာ ဆေးကျောင်းကလို.ပြောကြတာပဲ အစ်ကိုဆက်သွယ်မလို.လား
စိတ်ဝင်စားလို့။တရားမှတ်မလို့ ပြောတာပါ။ သူများတွေလိုတော့ လူသေကောင်ရှေ့ မမှတ်ရဲဘူး။
အပေါ်ဆုံးက ပုံပေါ့ နေကာ မျက်မှန် ချိတ်ထားတဲ့ နေရာနားကသာ တားမြစ်နယ်မြေ သာဆို မျက်လုံး တွေ သေနတ်မှန်နေတာကြာပြီ
ဒီ scraf ပတ်ထားတဲ့ မမလေးကိုတွေ့တော့
ကျုပ်ငယ်ငယ်က ရွာမှာ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေးကို သတိရမိပါရဲ့
ကျုပ်တို့ရွာမှာလည်း ဒီလို စမ်းချောင်းလေးရှိတယ်ဗျ
ကျုပ်တို့ရွာကနေ တစ်ဖက်ရွာကို သွားခြင်လို့ လှည်းလမ်းအတိုင်းလိုက်လို့ ခရီးဝေးဝေးမသွားခြင်ရင်
အိုက်ဒီစမ်းချောင်းကို ဖြတ်ပြီးသွားလို့ရတဲ့ ဖြတ်လမ်းရှိတာပေါ့နော
စမ်းချောင်းကိုဖြတ်ရင် တံတားမရှိတဲ့အတွက် ရေထည်းကနေဖြတ်ရတာပေါ့ ပြီးရင် ကန်သင်းရိုးအတိုင်းလျှောက်ပေါ့
မိုးတွင်းဆိုရင် ပုံမှန် ခြေသလုံးလောက်ထိရှိတာပေါ့
မိုးရွာလို့ တောင်ရေကျရင်တော့ ဖြတ်လို့မရဘူး ရေများတာပေါ့နော
ပြောရရင်တော့ အဲ့သည် ချောင်းကူးနေရာလေးက ကျုပ်တို့အတွက်
ပြောခဲ့သလို မိုးလေးရွာထားပြီး တောင်ရေလေးကျထားလို့ ရေမနည်းမများ
ကောင်မလေးတွေချောင်းကူးတာကို မျက်နှာခြင်းဆိုင် ခြုံပုတ်ထဲကနေချောင်းတာပေါ့
တောင်ရေကျထားလို့ ရေက ပေါင်လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ
သူတို့ထမီကို ရေမဆိုရအောင် တဖြည်းဖြည်းလေး မ . .. တင်ပြီးကူးတဲ့အခါ
ပြောရရင်တော့ ပေါင်အရင်းလောက်ထိ ထမီကို မ .. တင်တာပေါ့ဗျာ
ရွာမှာဆိုတာက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပေါင်ရင်းလောက်ထိမြင်ရဘို့ဆိုတာ
မိုးရွာပြီး တောင်ရေကျချိန် ကျောက်စမ်းကိုဖြတ်မှ တွေ့ရတာဗျ
မြင်ခြင်ရင် အပြီ ပုန်းပြီးချောင်းရတာဗျ
တစ်ခါတစ်လေများ အကောင်မတွေ သူတို့ အုပ်စု လူတောင့်ရင်
အားရပါးရကို ထမီလှန်ပြီး ချောင်းကူးကြတာဘဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စ..ရင်း နောက်ရင်းပေါ့
အဲ့လိုအခါကြရင်တော့ ကျုပ်တို့လည်း မြိုးမြိုးမျက်မျက်လေးခံစားရတာပေါ့
တစ်ခါတစ်လေလည်း တစ်ချို့က ထမီအစိုခံပြီးကူးတယ်ဗျ ဘာမှမတွေ့ရဘူး
ကျုပ်လည်း လယ်ထဲဆင်းကြည့်ပြီး ပြန်မယ်လုပ်တော့ မိုးရွာပါလေရော
အဲ့သည်နေ့က ဟိုဘက်ရွာမှာ ဘာအလှူလဲမသိဘူးရှိတယ် မနက်ရှစ်နာရီလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်
ဖြစ်ပုံက မိုးကလည်း နာ၇ီဝက်လောက်ဘဲ သဲသဲမဲမဲရွာပြီးရပ်သွားတယ်
ကျုပ်လည်း ဂွင်သိထားတော့ အပီနေရာယူထားတာပေါ့
မကြာဘူးဗျို့ အကောင်မတစ်အုပ် အသစ်အင်္ကျီတွေနဲ့ ချောင်းဘေးရောက်လာကြတယ်
ရေကလည်း ကျုပ်တို့အကြိုက် အမှတ်အသားထိရောက်နေပြီ ရေစီးလည်းနည်းနည်းသန်နေတယ်
ဘယ်နည်းနဲ့မှ သူတို့ထမီရေစိုခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ သေချာပေါက်ကို လှန်မှာဘဲပေါ့
တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဆူညံနေကြတုန်းမှာဘဲ ဘယ်လိုစိတ်ကူးပေါက်သွားကြတယ်မသိဘူး
အလျှင်လို လမ်းအိုလိုက်ကြတယ်ဗျာ လှည်းလမ်းအတိုင်းပြန်တက်သွားကြတယ်
ကျုပ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်မနိုင်ခဲမရနဲ့ ဖြစ်နေတုန်း
အိုး ဝေးကဝေးသနဲ့ သွားနိုင်ပါဘူးဆိုပြီး
အဖွားကြီးတစ်ယောက်ဗျာ ပက်ပက်စက်စက်ကြီးကို ထမီလှန်ပြီးချောင်းကူးလာတာ
ပြီးရင် ကျုပ်တင် တဲ့ ပို့ စ်ကို သေချာ မဖတ် ပဲ
တောင်းပန်သင့်တယ် လို့ လာပြီးပြောပေးဦး နော် ။ ( ဆူးမင်းဖြစ် )
အဲဒီအမျိုးသမီးက ဆယ်ရီဘရိတ်တီမဟုတ်.. နိုင်ငံေ၇းသမားမဟုတ်ဖူးဆိုရင်.. သူ့ပရိုက်ဗေစီကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့.. ဒါမျိုးပို့စ် မီဒီယာမျက်နှာစာမှာလာမတင်သင့်ဘူး…။
တိုင်စာရရင်တော့..စည်းကမ်းအတိုင်း ပွိုင့်၁၀၀၀ ဖြတ်ရပါ့လိမ့်မယ်..။
ဒါမျိုးတွေကို ကြည့်ခြင်ရင် ဒီပြင်ဆိုဒ်မှာပဲရှာကြည်ပရစေခင်ဗျား
သဘတ်နဲ့ပတ်တယ်လည်း ပြောသေးတယ် … ကြယ်သီးတစ်လုံးပါလာပါလား …
သေသေချာချာ ကြည့်တော့ etone ပြောတဲ့
ကြယ်သီးကို တွေ့လိုက်တွေ့လိုက်ရပါကြောင်း …………
မမတုန် ဘယ်ဟာကိုပြောတလည်း သားသားနားမလည်ဘူးဗျ
သူကြီးက ပွိုင်.ဖြတ်မယ်လို.ပြောတာ ကြောက်နေပြီ
၇ွာသားတွေက ကိုပေ.ပို.စ်ထဲမှာ သိရင် တင်ပေးပါဆိုလို. တင်ပေးလိုက်တာပါသကြီးရယ်
ပွိုင်.သာအဖြတ်ခံရလို.ကတော. ၇ွာထဲကတင်ခိုင်းတဲ. အစ်ကိုတွေ ပြန်စိုက်ပေးရမယ်နော်
အမေရေကယ်ပါအုံး သူကြီးက အနိုင်ကျင်.နေလို. အဟင်. အဟင်.
Anyhow, now you got one lesson from Thu Gyee.
That’s why, me & wind talker didn’t show the photos directly,
instead, just say the link address of those photos.
The line between right & wrong is very narrow.
လက်ကိုင်းတွေက လက်ဝှေ့ထိုးစားရင် အောင်မြင်မယ်….
သများဒွေ ပို့စ်တစ်ခုလုံး အပီခိုးပြီးတင်တာကြတော့
သတိပေးတယ်တို့ ဘာတို့ညာတို့ ( တစ်ခါတစ်လေ မသိခြင်ယောင်တောင်စောင်လိုက်သေး )
မှားခဲ့ရင်လည်း ပို့စ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီးတာဘဲဟာ
လွန်တာပေါ့ သူ့ခမျာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေရတဲ့ဥစ္စာ
သဂျီးကိုကြည့်ရတာ ရွှေဘိုသားတွေကို မကြည်ဘူးထင်တယ်
လူခြင်းမသိပေမယ့် ဒေသခြင်းတူတဲ့အတွက် အရေးကြီးရင် သွေးနီးရမှာဘဲ
ဗျို့ ဘကြီးဖက် ဟော့ဒီမှာ
သူများဝါဆိုလပြည်.က အလှုငွေမရလို. စိတ်ညစ်ရတဲ.အထဲ
မနေ.က ရှိတဲ.ပိုက်ဆံလေးနဲ. ရွာထဲဝင်တာ ကွန်မကောင်းလို. ဒါလေးတင်ဖို.3နာရီတောင်သုံးလိုက်ရတာ
အခုတော. မ၇တဲ.အပြင် အဖြတ်ခံရမယ်ဆိုတော.
ပုံတွေကြည့်ပြီး သဂျီးချွတ်လို့ မရဘူး၊ ငြိနေလို့တဲ့။ :cool:
ရွှေဘိုသားက အင်တာနက်ဆိုင် မှာဆို။ အင်တာနက်အလကားသုံးရတယ်ဆို။
အဖြတ်ခံရရင် ပြန်ကျေအောင် ဆယ်ရီဘရိတ်တီပုံတွေ ၁၃ ပိုစ့်လောက် ရှာတင်ပေးလိုက်ပေါ့။
အဲဒါတွေ ပေါမှပေါ နော့။
ထ.မှ ချွန်မှန်းသိတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့
တစ်ခုခုဆို Privacy ရှိတဲ့ Facebook က ပြန်တာပါ..လို့ ဆို..ဂျီဂျီးက ညိုညင်နေသေးတယ်
ရိုက်ပြီး တင်ချင်သလိုတင်ပြီးမှတော့ ဒီလိုပဲ ပွ ပေမပေါ့
နဂိုထဲက ဖွ ချင်နေကြတာချည်းကို ..
မဖွ စေချင်ရင် နဂိုထဲက မပွ နဲ့.. ဒါပဲ
အမောင်ရွှေဘိုသားခင်ညာ ကုသိုလ် ၈၀ ……. ငရဲ ၁၀၀၀ ဖစ်တော့မယ်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရွာထဲ မရောက်တာ ကြာသွားလို့လားမသိ
ရွာရဲ့ အပြင်အဆင်တွေက တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး
တင်ထားတဲ့ဟာတွေကို ဖတ်မလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ….
ဟူးးးးးးးးးးး …………. ရေတောင် ငတ်တယ် …
မetone ပြောတဲ့ ကြယ်သီးကို လိုက်ရှာရတာ ….. ဟင်းးးးးးးးး ကွန်နက်ရှင်ကလည်း ဆိုးပါပေ့ကွာ
ကျွန်တော်ကြယ်သီးရှာသေးတယ် မတွေ့ဘူး …. မှဲ့ကြီးကြီးပဲတွေ့တယ် …. ကြယ်သီးတွေ့ရင်ပြောဦး …. ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုပို့တွေကို ထောက်ခံတယ် မသိတဲ့သူတွေ သိကုန်ပီ ဒါမှရှောင်နိုင်မှာ မရှောင်နိုင်ရင်လဲ ညှိကြည့်ပေါ့ ……
If you want to see ကြယ်သီး,
Down load the first photo.
Enlarge or zoom it in your computer.
Please emphasize on her right side.
Otherwise, it’s very difficult to see ကြယ်သီး.
Anyhow, appreciateetone for your very good eyesight.
ဒီအတိုင်းလည်း မြင်နေရတဲ့ဟာကို ဒေါင်းလော့လုပ် ၊ အကြီးချဲ့ပြီးမှ မြင်တာ မဟုတ်ပါဘူး
ပုံကြည့်ပီး စာဖတ်ရတာ ကီးမကိုက်ဘူး
ဆရာမတော.မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ ခြေထောက်မှာ တက်တူးထိုးထားတာဆိုတော.ဟိုဟာများလား:D
နေရာကတော. တောင်ငူအရှေ.ဘက် ၁၃ မိုင်က သံတောင် ပသိချောင်းမှာဗျ ရောက်ဖူးလို.မှတ်မိတယ်
စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ ဒီပုံကိုupload လုပ်တဲ့ သူကတော်တော် နှမချင်းမစာမနာတဲ့ အောက်တန်းစား အဆင့်မရှိတဲ့ သူ့ပဲ ။ သူဘာသာသူဘယ်လိုပဲရိုက်ရိုက်ပေါ့ ကိုယ်မြင်လဲမြင်တဲ့ အတိုင်းပဲနေလေ အဲလိုကြီးတင်တာတော့မကောင်းဘူး ။ ကိုယ့်အမတွေ နှမတွေ အမေတွေနဲ့ နှိုင်းပြီး စဉ်းစားကြည့်ပေး ပါ။ အခုပုံကိုတင်တဲ့သူကတော့ တကယ့် တကယ့် အောက်တန်းစားပါ။။။
အရှက်မရှိ အရိုက်ခံထားတဲ့ပုံ(ခိုးရိုက်တဲ့ပုံမဟုတ်ပါ) ၊ အမေ အစ်မတွေရှေ့မှာတောင် ဒီလို ၀တ်ဖူးရဲ့လား မသိပဲ ရိုက်ခံထားတဲ့ပုံ ကို အဖတ်လုပ်ပြီး တင်တောင် မတင်သင့်ဘူး ရွှေဘိုသားရေ ။
သူ့ဘာသာသူ ကဲတုန်းက ကဲပြီး အင်တာနက်ထဲပါလာတော့ နာတတ်တယ် … ။ ဘယ်သူမပြုမိမိမှူပါ ..ကိုယ်တိုင်က ရဲတင်းပြီး အရိုက်မခံလျှင် ဒီလိုပါလာစရာကိစ္စလည်း ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး … ။ ကိုယ့်အမေ ၊ နှစ်မ ၊ အစ်မတွေနဲ့ နှိုင်း ယှဉ်ခံချင်လျှင် …. သူတို့လိုနေပေါ့ ..
ရွှေဘိုသားရေ … မင်းတော့ မသိဘူး … အစ်မတော့ ဖတ်ပြီး ဒေါသထွက်တယ် ။ :angry: ငပြူးက ပြန်ဟစ်နေလို့ ဟေ့… နောက်တခါ .. နာမည်ထပ်ကြီးချင်လို့ … ကိုယ်တုံးလုံး ပဲ အရိုက်ခံခံ … ယောင်လို့တောင် သွားမကြည့်နဲ့ ပို့စ်မတင်နဲ့ … … ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ နှစ်မျိုးပဲရှိတယ် ။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာရှိလဲ လူတိုင်းသိတယ် ။
ရွာသားတွေ ပုံကြည့်ပြီး နှာရည်တွေ ထွက်နေကြပါလား။ တရွတ် တရွတ် နဲ့.. နှာမွှန်ပျောက်ဆေး လိုက်ရောင်း အုန်းမှပဲ.. စီးပွားရေး ဈေးကွက် အသစ်ပဲ။
သရေကျတာ သုတ်ဖို့ တစ်ရှုးတို့ ဘာတို့ ရောင်းချင်တဲ့ လူတွေ ကန်ထရိုက်ဆွဲကြပါ။
မမဆူးလည်း အခုမှပေါ်လာတော.တယ်နော် ဘယ်ပျောက်နေတာလဲ
tediousgirl ရေမင်းပြောသလို ငါကအဆင်.မရှိတဲ. မိမဆုံးမဖမဆုံးမအောက်တန်းစား ဆိုလည်းမင်းပြောချင်
သလိုပြောပါ ဒီငါတင်လိုက်တဲ.ပို.စ်လေးကြောင်. ငါ.အမေကို ထိခိုက်တာကိုတော.
တင်မိတဲ. ငါ.ကိုယ်ငါပဲ အပြစ်တင်မိတယ် ၀မ်းလည်းနည်းမိပါတယ်
ငါပြောမယ်နော် သူကတောင် အများသိစေချင်လို. facebook မှာတင်ထားတာ မင်းကဘာ.လို.နာနေတာလည်း ငါတောင်းပန်ပါတယ် မင်းကိုထိခိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မ etone
ကျနော်နောက်ဆင်ခြင်ပါ.မယ် အခုဟာကျတော. တော်တော်လည်းအပြောခံရတော. ၀မ်းနည်းလို.
ပို.စ်တောင်ထပ်တင်ထားသေးတယ် နောက်များတော. ယောင်လို.တောင် မတင်တော.ပါဘူး
အခု tediousgirl ပြောတာက တော်တော်ကိုရိုင်းလွန်းပါတယ် ဒေါသထွက်တာပေါ.ဗျာ
သခိုးက လူပြန်ဟစ်သွားတာကိုး ထားပါ တင်မိတဲ. ကျနော်.အမှားပဲဟာ
ကျနော်တစ်ခုမေးချင်တယ် နာရအောင်က အခုပုံက tediousgirl များဖြစ်နေလို.လားပေါ.
အရှက်မရှိ အရိုက်ခံတယ် အင်တာနက်ထဲတင်တယ် ကျနော်ထပ်တင်ပေးလိုက်တယ်
သူတောင် တင်ရဲသေးတာဗျာ ကျနော်လည်း တင်ပေးမှာပေါ. ရှင်းတယ်နော်
အမေတွေနှမတွေနဲ. နှိုင်းယှဉ်ရင် ငါ.အမေနဲ.နှမ အစ်မ တွေနဲ.မတန်လို. နှိုင်းယှဉ်မကြည်.တော.ပါဘူး
ဘာ.လို.လည်းဆိုတော. သူတို.က ရွာမှာ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်ပြီး ဘ၀ ကိုဖြတ်သန်းနေကြလို.
ဒီလိုလုပ်ဖို. နေနေသာသာ သီချင်းထဲကလို
(ကောက်စိုက် ပျိုးနှုတ် နေ၀င်မိုးချုပ် အလုပ်နဲ. လက်မပျက်တယ် ) မင်းကြားဖူးမှာပါ အဲလိုပဲ ကျနော.မိဘ
သူ့ရဲ့ ရုပ်ရည် ခြေဆစ် လက်ဆစ် အနေအထားကိုကြည့်ရတာတော့……
မပေါ်ချင်ရင် အစောကြီးထဲက မပုတ်နဲ့…
မကျော်ချင်ရင် အစောကြီးထဲက မဟုတ်နဲ့…..
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒါကိုပြောတာထင်ပါရဲ့ ပြစရာရှားလို့ချောင်းထဲကငါးကိုမှသွားပြရတယ်လို့ဗျာ
ဘယ်မိဘ တွေကမွေးထုတ်လိုက်လဲမသိဘူး ကမြင်းမကို
ကိုယ့်ရဲ.ပင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်အရဆို သူများသားသမီးကိုဒီလိုမပြောချင်ပါဘူး…. ဒါပေမယ့် အပေါ်က ကောင်မလေး ကပို.စ်တင်တဲ.လူကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ထားတာ ပြင်းထန်လွန်းတယ်…အခုဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးက ကိုယ့်အမ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တောင် အမမှားတယ်ပဲပြောမှာပဲ…ဘာလို.လဲဆိုတော. ကိုယ့်အမကိုိယ်တိုင်ကိုက အရှက်မရှိ ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံထားတာကိုး….
this photo is Ma theint theint htwe .တောင်ငူ university မြန်မာစာ က ရာမလို့ပြောပါတယ်..ခြေတောက်မှ တက်တူးရှိပါတယ်…singapore မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်..
တောင်ငူ uni မှာ doctor ဘွဲ့ အတွက် singapore မှ လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်….photo က ခေတ်ကာလအရ မကလက်ပါဘူး…..ဘာလို့များဒီလောက်တောင်ပြောနေတာလဲ…..
လေကန်လို့ သေဒဏ်ပေးမယ်ဆိုရင် မဝေဖန်တော့ပါဘူး
အင်းပေါ့လေ—- သူကဘယ်သူ့ များထုတ်ဖော်ပြချင်နေတာလဲမသိပါဘူး။ရှေ့ ကသူ့ ဘဲကိုလား ဒါမှမဟုတ်ရင် သူ့ အဖေဆိုလား။အဖေရှေ့ မှာဒီပုံတိုင်းဆို ကျောကော့နေအောင်ဆော်ခံရမှာ။ဝတ်ရဲပါဘူး